Kajy politika | mandimby maharo
Kajy politika	Posted on 9 August 20129 August 2012 by Mandimby Maharo	Tsy nisy fifanarahana! Samy nihizingizina tamin’ny heviny na Rajoelina na Ravalomanana nandritra ilay fihaonana faharoa tatsy Seychelles. Tsy nahataitra intsony nefa io tsy fahitana marimaritra iraisana io raha ny fihevitry ny mpanara-baovao politika teto an-toerana. Samy miandry izay ho fanapaha-kevitry ny tsirairay amin’ireo mpifanandrina roa ireo alohan’ny 16 Aogostra ny rehetra.moandry izay ho apoakan’ny Sadc koa.
Niendrika fialana bala amin’izay mety ho fanasazina ho ataon’ny Sadc fotsiny sisa ny endrika nisehoan’ilay fihaonana tany Seychelles ny 08 aogostra 2012 teo. Sarisarim-pihaonana ihany satria dia na ny andaniny na ny ankilany dia efa samy efa mazava ny ao an-tsainy : Ravalomanana tsy mahalala afa-tsy ny fodiany sy ny fahafahany milatsaka ho fidina ; Rajoelina kosa dia ny hanakana io fodiana io sy ny hanao izay tsy afahan’ity filoha teo aloha ity hilatsaka ho fidina intsony no tanjony. Porofon’ireo ny fihetsika rehetra nasehon’ireto politisiana ireto nialoha iny fihaonana iny. Teo aloha iny fiverenan’dramatoa Ravalomanana Lalao tsy nahomby iny. Namaly bontana ny tao amin’ny Fat ka dia nanao « valandresaka » nanatitraterany fa tsy hisy mihintsy ny mety ho firotsahan’io mpifanandrina aminy io izy ; nialoha ny nihazoany an’ny Seychelles.
Miankina amin’izay mety ho fanampahakevitry hy Sadc amin’ny fivoriany manaraka noho izany ny mety ho avy politikan’ny Madagasikara ; sy izay mety ho avy politikan’ireto roa lahy ireto. Raha i Andry Rajoelina manokana dia mihevitra fa ho afaka hitondra irery ny tetezamita amin’izay mandrapaha tonga ny 08 may 2013 hanaovana ny fifidianana. Izay indrindra no mody anaovany lamgo malefaka eo imason’ny vondrona iraisam-pirenena ka nanatrehany iny fivoriana iny na dia tsy nisy mihintsy ny fahavononana aza tao aminy. Efa nahazo toky tany amin’ny fanjakana Frantsay koa tamin’ny fanomezan’ity farany ny vola 1.2 tapitrisa hanaovana ny fifidianana. Marc Ravalomanana kosa dia mahatoky tena amin’ny fahaizany mandresy lahatra ireo vondrona ireo amin’ireo fananany olona maro any anivon’ireny sampan-draharaha ireny. Tombo ananany koa ny fifankazahoany amin’ireo tany miteny anglisy aoriany.
Ny zava-misy nefa aloha dia na ny andaniny na ny ankilany dia toa tsy mahavita mbola naharesy lahatra ny vondrona iraisam-pirenena tsara hatreto ka nandraisan’izy ireo fanampahakevitra henjana. Izao fiandrasana izao dia mbola midika fa mbola misy fifranarahana mandeha any ambadika any mialoha ny tena raharaha http://wp.me/s2bmqq-ekspera
Tags: politiqueCategories: politique, Uncategorized